Ijezi Yelaphu | Kwichina ijezi yelaphu abavelisi, abaXhasi
Umqhaphu-ngathi yinylon spandex yolule ijezi yelaphu
Inkcazo Le yenyani ye-cotton-spandex eyolula ijezi yelaphu, inqaku lethu le-FTT30129, linithiwe nge-86% ATY (umsonto owenziwe ngomoya) nenayiloni kunye ne-14% spandex. Eli laphu libonisa ukuthamba kwesandla esivakala ngathi ngumqhaphu ngenxa yentsimbi ekhethekileyo yentsimbi yentsimbi esetyenzisiweyo kunye nelaphu lejezi. Le cottony yesandla sokuziva yolula ijezi yelaphu ine-nkqo ye-2-way elula kwaye ine-mec ethe tyaba ...
Inkcazo Le polyester eyodwa yejezi yelaphu, inqaku lethu lenombolo FTT-WB003, linithiwe nge-100% ipholiyesta 200 denier. Ilaphu lejezi elinye linembonakalo enye kwicala lobuso kunye nelinye elingasemva. Imiphetho iya kujika okanye isongele. Kwaye ubude bububanzi buphantse bube kabini kubude. Iimpawu zelaphu laseJersey ukuba zithambe kwaye zikhululeke emzimbeni. Ijezi enye yeyona isetyenziselwa ukwenza iT ...
Inkcazo Le polyester spandex elula ijezi yokuluka ilaphu, inqaku lethu lenombolo FTT-WB105, linithiwe nge-85% ipholiyesta kunye ne-15% ye-spandex. Ilaphu linendlela emi nkqo ye-2 kwaye linomatshini othe tyaba othe tyaba. Esi lilaphu lejezi elinokuphefumla eliphelelweyo. Inemvakalelo evakalayo kunye nokuhamba kakuhle okuhamba ngenxa yokuthungwa kwejezi yejezi. Ilaphu lejezi elilodwa le-Plain linokubonakala enye kwi ...